China Ultrasonic Ballast Mvura Disinfection ne ultrasonic kurapwa system fekitori uye vagadziri | Powersonic
Ultrasonic Ballast Mvura Disinfection neiyo ultrasonic kurapwa system
ultrasonic sero kuvhiringidza
Muenzaniso SONO20-1000 SONO20-2000 SONO15-3000 SONO20-3000
Kakawanda 20 ± 0.5 KHz 20 ± 0.5 KHz 15 ± 0.5 KHz 20 ± 0.5 KHz
Simba 1000 W 2000 W 3000 W 3000 W
Kupisa 300 ℃ 300 ℃ 300 ℃ 300 ℃
Dzvinyiriro 35 MPa 35 MPa 35 MPa 35 MPa
Kusimba kwezwi 20 W / cm² 40 W / cm² 60 W / cm² 60 W / cm²
Max Kugona 10 L / Min 15 L / Min 20 L / Min 20 L / Min
Zano Musoro Wenyaya Titanium Chiwanikwa Titanium Chiwanikwa Titanium Chiwanikwa Titanium Chiwanikwa
Ultrasonic Ballast Mvura Disinfection Iyo ultrasonic kurapwa system
Ultrasonic Ballast Mvura Kurapa Marine zvisikwa zvisikwa zvinogona kugoverwa muzvikamu zvitatu zvinotevera
Kukura kwakapfava senge chipanji;
Hutachiona uye imwechete-sero organic chinhu, senge dzakasiyana mhando dzehutachiona uye algae;
Mhuka dzakaomarara dzemumvura, senge mabarnacle, bivalve molluscs, nezvimwe.
Ruzha runogona kutsanangurwa sesimba remagetsi rinofambiswa nemafungu ekumanikidza mune yepakati zvinhu. Nekudaro, ruzha runogona kutsanangurwa sechimiro chesimba kana ruzha rwunonzi rwunogadzirwa. Izvi zvinosiyanisa ruzha simba fomu mamwe mafomu esimba, senge magetsi emagetsi. Iyi dudziro yakajairika inosanganisira ese marudzi eruzha, anosanganisira anonzwika ruzha, pasi-frequency seismic mafungu (infrasound), uye ultrasound.
Ultrasound ndeye cyclic kurira kumanikidza ne frequency yakawanda kupfuura yepamusoro muganho wekunzwa kwevanhu. Kunyangwe uyu muganho uchisiyana kubva pamunhu kuenda kumunhu, iri rinosvika makumi maviri kilohertz (20,000 hertz) mune hutano, vechidiki vakuru uye nekudaro, 20 kHz inoshanda seyakaderera yakaderera muganho mukutsanangura ultrasound.
Ikozvino kushandiswa kweultrasound kunosanganisira semuenzaniso: sonochemistry (emulsification, kumhanyisa kwemakemikari maitiro, kuburitsa nezvimwe), kupararira, uye kukanganisa kwemasero ehupenyu (ultrasonic kuparara), kubviswa kwemagasi akavharirwa, kuchenesa kusvibiswa kwema microscopic, ultrasonic humidifier, ultrasound kuzivikanwa (USID ), uye zvinowanzo pinda nepakati uye kuyera siginecha yekuratidzira kana kupa simba rakatariswa. Iyo siginecha yekuratidzira inogona kuburitsa ruzivo nezve chimiro chemukati chepakati. Iko kunonyanya kuzivikanwa kushandiswa kweiyi nzira ndiko kushandiswa kwayo mune sonography kuburitsa mifananidzo ye fetus mudumbu remunhu. Kumwe kushandiswa kuri kushandisa ultrasound mukenza kuongororwa.
Nhamba dzekushandisa kwe ultrasound dzakawanda. Kubatanidza masaisai akakodzera, kukura kwakakodzera uye kushandisa mutrudhidhi chaiyo mhando dzakawanda dzekushandisa kweultrasound dzinogona kuwanikwa… 'Denga Ndiro Ganhuriro'…
Kufumura zvinwiwa kune yakakwira michina yekumanikidza mafungu (kana mafungu eruzha), masimba senge acoustical kutenderera, yakadzikama cavitation uye inononoka (isina kugadzikana kana inertial) cavitation inogona kuvezwa.
Semuenzaniso ultrasonic kuparara, sonochemistry uye sonoluminescence inomuka kubva kuacoustic cavitation: kuumbwa, kukura, uye kusingafadzi kupunzika kwemabhuru mune mvura. Cavitational kupunzika kunogadzira kwakanyanya kwenzvimbo kudziyisa (~ 5000 K), yakanyanya kumanikidza (~ 1000 atm), uye kwakanyanya kupisa uye kutonhora mitengo (> 10 9 K / sec). Acoustic cavitation inopa kusangana kwakasiyana kwesimba uye nenyaya, uye ultrasonic iradiation yezvinwiwa inokonzeresa masimba esimba emakemikari kuitika, kazhinji achiperekedzwa nekubuda kwechiedza.
Izvi zvinokwanisa chete kuwanikwa mune yakatarwa mamiriro inosanganisira akasarudzika maficha eiyo yepamusoro ultrasound simba (yakakwira W • cm-2, yakakwira dB) yakafumurwa kune yakadzikira yakadzika emvura mavhoriyamu ane yakadzikira tembiricha.
Ultrasonic Degassing Uye Defoaming Yemvura
Ultrasonic Liquid Ma processor
20L / Min 20khz michina uye ultrasonic (sonic ...
50l / awa 1000w 20khz ultrasonic mvura processo ...
Yakasarudzika Biologics Ultrasonic Homogenizer Mwanakomana ...
Yakakwira simba simba Ultrasonic Homogen ...
Yakakura Scale Ultrasonic Liquid processor Praphe ...
Titanium Nyanga ultrasonic homogenizer uye iyo di ...